Complete Ndepụta nke otú iji tọgharịa iPhone Paswọdu r
Passcode na ọtụtụ-eji site iPhone ọrụ iji chebe onwe ha, ha data si intruders. Ọ bụ nnọọ mfe ka a passcode nke anọ digits (ma ọ bụ karịa) iji nyochaa onwe gị iji nweta gị iPhone. Otú ọ dị, nke a dị mfe usoro na-ekwentị gị mma nwekwara ike na-etinye ị banye ná nsogbu mgbe ị na-echefu passcode. Ọ bụrụ na ị na-echefu paswọọdụ, ị nwere iji tọgharịa gị iPhone. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-ụzọ ziri ezi isi na-eme ya, i nwere ike ida niile gị onwe onye data on iPhone. Ma echegbula, na isiokwu a, anyị ga-atụle nhọrọ ndị ị na-enwe iji tọgharịa ma ọ bụ uzo na echefu passcode gị iPhone.
Part 1. Olee iji tọgharịa iPhone Paswọdu ma ọ bụrụ na Ị na-echeta Ugbu A Paswọdu
Part 2. Olee iji tọgharịa iPhone Paswọdu mgbe chezọrọ Ugbu A Paswọdu
Ọ bụrụ na ị ka na-echeta ugbu a passcode, mgbe ahụ, tọgharịa iPhone paswọọdụ okwu bụ nnọọ mfe: Gaa Ntọala> Ozuruọnụ> Touch ID & passcode (iOS 9/8/7) ma ọ bụ passcode mkpọchi (iOS 6)> itinye ugbu a paswọọdụ na mgbata ịgbanwe passcode. Wee tinye ọhụrụ passcode. Ọ bụ ya.
Ke ikpe ebe ị na-apụghị nnọọ icheta passcode ị dara, nhọrọ ị na-ekpe na bụ iweghachi gị ngwaọrụ site na nkwado ndabere na mpaghara. Ụfọdụ ndị na jụrụ ma ọ bụ omume iji tọgharịa iPhone passcode enweghị weghachi. N'aka na ị nwere ike tọgharịa gị iPhone enweghị weghachi, ma na ị nwere iburu data ọnwụ mbipụta. Mweghachi bụ ezi nhọrọ. Ọ erases niile ọdịnaya na ngwaọrụ gị-gụnyere passcode-na-anọchi ya a ndabere nke gị nhọrọ. Otú ọ dị, ọ na-adabere ma ị nwere ndabere faịlụ ma ọ bụ. Gbalịa gị chioma site na-eso otu n'ime ụzọ n'okpuru nke ahụ dị mma n'ihi unu:
Ngwọta 1: Tọgharia iPhone passcode na iTunes (mgbe tinye paswọọdụ na-adịghị chọrọ)
Ngwọta 2: Tọgharia iPhone passcode na iCloud Chọta My iPhone (Mgbe Chọta My iPhone bụ NA)
Ngwọta 3: Tọgharia iPhone passcode na Iweghachite ọnọdụ (ma ọ bụrụ na ngwọta 1 na nke 2 bụ adịghị)
Ngwọta 4: Siri nwere ike Ị kpọghee ekwt gị iPhone, na-agbalị ya!
Ọ bụrụ na ị chefuru gị passcode, ị ka pụrụ Ị kpọghee ekwt gị iPhone ọ bụrụ na i synced ngwaọrụ gị na iTunes. Site iTunes, ị nwere ike iweghachi gị iPhone si ikpeazụ ndabere na-ewepụ ndị passcode si gị ekpochi iPhone mgbe retaining gị data. Iweghachi gị iPhone site iTunes, na-eso nyere nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na kọmputa ị na-ejikarị mmekọrịta na site na eriri USB.
Nzọụkwụ 2. Launch iTunes. Ọ bụrụ na ị synced gị iPhone na iTunes, mgbe ahụ, ọ dịghị "tinye paswọọdụ" a chọrọ. Ọ bụrụ na iTunes-ajụ gị ịbanye passcode, na-agbalị ọzọ na kọmputa. Ma, ị ga-eso ndị Tọgharia iPhone passcode na Iweghachite ọnọdụ ngalaba dị n'okpuru.
Nzọụkwụ 3. iTunes ga-akpaghị aka mmekọrịta gị iPhone na ịmepụta ndabere faịlụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, i kwesịrị mmekọrịta gị na iTunes na ịmepụta ndabere faịlụ aka site na Summary window.
Nzọụkwụ 4. Na Summary window, ị pụrụ ịhụ nhọrọ "Weghachi iPhone". Pịa ya na-eso kpaliri ịhọrọ ọhụrụ iTunes ndabere iweghachi gị iPhone.
Gị passcode ga-ehichapu na ndị niile gị data ga-eweghachi gị na ndabere, mgbe mweghachi usoro zuru ezu. Ị ga-now-enwe ike nweta gị iPhone enweghị ihe ọ bụla passcode.
Ọ bụrụ na ị nyeere Chọta My iPhone na gị iPhone, ị pụrụ iji ya ihichapu gị echefu passcode. Nzọụkwụ a ga-agbaso bụ:
Nzọụkwụ 1. Gaa icloud.com/#find~~V na abanye na na gị Apple ID na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Pịa Chọta My iPhone.
Nzọụkwụ 3. Click All Devices na elu nke nchọgharị gị window.
Nzọụkwụ 4. Họrọ gị iPhone niile ngwaọrụ depụtara. Pịa ihichapu iPhone ihichapu gị iPhone tinyere ya passcode.
Nzọụkwụ 5. Jiri Mbido nnyemaaka na ngwaọrụ gị iji weghachi kasị nso-nso ndabere nke ngwaọrụ gị.
Cheta na: Your passcode ga-ehichapu na ndị niile gị data ga-eweghachi gị iCloud ndabere. Ị ga-now-enwe ike nweta gị iPhone enweghị ihe ọ bụla passcode.
Ọ bụrụ na ị nwere mgbe synced ngwaọrụ gị na iTunes, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nyeere Chọta My iPhone na gị iPhone, ị ga-etinye gị na ngwaọrụ na mgbake mode ihichapu ngwaọrụ na ya passcode. Soro nyere nzọụkwụ iweghachi gị ngwaọrụ:
Nzọụkwụ 1. Kwụpụ niile cables si gị iPhone na gbanyụọ ya;
Nzọụkwụ 2. Pịa ma jide Home bọtịnụ na jikọọ na ngwaọrụ gị iTunes. Ọ bụrụ na gị iPhone adịghị atụgharị na, biko gbanye ya aka.
Nzọụkwụ 3. Gaa n'ihu na-ejide Home bọtịnụ ruo mgbe ị na-ahụ Jikọọ na iTunes ihuenyo. iTunes ga-echetara gị na ọ achọpụtara a ngwaọrụ na mgbake mode.
Nzọụkwụ 4. Pịa OK. The Summary taabụ na iTunes-egosi. Pịa "Weghachi iPhone" na weghachite iPhone.
Cheta na: Iweghachite ọnọdụ ga-akwụsị gị niile data na passcode si gị iPhone, resetting ya factory defaults. N'ihi ya, ị ga-ohuru iPhone enweghị ihe ọ bụla onye data.
Otu nhọrọ na-akpọ "Kwe Ka ohere Siri mgbe ekpochi na a passcode", ma ọ bụrụ na nyeere, ga-ekwe ka Siri iji nweta a dum nso nke ọrụ na-enweghị abanye passcode. Nke a na atụmatụ virus a oké njọ iyi egwu na nche nke gị iPhone.
Cheta na: ezie na nke a ụzọ dị na ụfọdụ iPhones, ọ ga-iyi egwu na seruity gị iPhone. Mgbe akpọchi gị iPhone, ị kwesịrị ị na-egbochi nhọrọ site na isoro usoro n'okpuru:
1. Gaa "Mwube" icon si n'ụlọ ihuenyo.
2. Site na "Mwube" menu, enweta "General".
3.-ahọrọ "passcode mkpọchi" nhọrọ ke "General" menu.
4. Sapeta "Ka ohere Siri mgbe ekpochi na a passcode" nhọrọ "Gbanyụọ".
Ike Tọgharia iPhone & Soft Tọgharia iPhone
Olee otú Ị kpọghee ekwt iPhone Paswọdu
Olee Otú M Pụrụ Nyefee Data Site Old ekwentị ka New iPhone agba ọsọ iOS 9 site iClou
> Resource> iPhone> A Complete List iji tọgharịa iPhone Paswọdu